31 | mai | 2013 | filazantsaramada
« Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin’ny fitiavana no mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. »
(I Jaona 4:16)
Ny Epistily dia taratasy soratana amin’ny olona efa mino. Izany no anton’izao teny hitantsika eto izao. » Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. »
NOFORONINY TAHAKA NY ENDRINY NY OLONA
Raha mandinika isika dia hafa noho ny zavatra rehetra ny olombelona ary tamin’ny namoronan’Andriamanitra azy dia izy irery no noforonony tahaka ny endriny. Mety mandiso hevitra antsika ny mieritretra ny dikan’ny hoe: tahaka ny endrik’Andriamanitra, ny tena hevitr’izany dia ny fanana’ny olona firaisana Amin’Ilay Andriamanitra nahary azy; afaka miresaka Aminy ary afaka mihaino ny feony. Raha amin’izao andro izao dia afaka mivavaka sy mamaky ny tenin’Andriamanitra na mihaino Azy isika. Tsy misy manana izany harena izany ny biby, na ny zava-maniry, na ny zava-boaary hafa rehetra.
MIPETRAKA EO AMIN’NY TOERANA
Mitoetra eo amin’ny toerana nametrahana antsika ve isika? Mitoetra amin’ny maha endrik’Andriamanitra antsika ve isika? Ny maha endrik’Andriamanitra antsika dia ny firaisantsika Aminy amin’ny alalan’ny teniny: io ny tenin’Andriamanitra eo ampelatanan’ny olona io, io no iresahany amin’ny olona, manao ahoana ny fitiavan’ny olona izany? Manao ahoana ny fankatoavan’ny olona izany? Sa mamaky ihany isika fa tsy mankatoa ? Raha tsy mankatoa izany teniny izany ny olona dia tsy mitombo ao anatin’ny olona ny teniny ary izany no nilazany hoe: « hianareo mamono Ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo ». Asa na manao ahoana ny firesahan’ny olona amin’Andriamanitra, izany moa no atao hoe vavaka, fa izany koa no nametrahana ny olona dia ny hiresaka amin’Andriamanitra; moa ve mba mahatsiaro miresaka amin’Andriamanitra tokoa ny olona?
Ianao ve mba mahatsiaro mihaino ny tenin’Andriamanitra? Sa aleonao mihaino feo hafa izay mety mahaliana kokoa ankehitriny, ka ny fiainantsika aza dia filan’ny nofo ihany toy ny an’ny an’ny biby ka rsy maharsiaro akory izay mivavaka anefa mety hitarika any amin’ny fahaverezana aza? Manao ahoana ary ny faharetantsika miresaka amin’ny Tompo, sa dia ataontsika alasafay rehefa mihinan-kanina fotsiny no mivavaka raha tsaroana aza izany. Ny tenin’ny Tompo tokoa dia milaza fa raha tsy miray amin’ny foto-boaloboka ny sampana dia ho maina ka ariana, ary atao fampirehetana afo.
Aoka ary isika hitoetra amin’ny toerana natao antsika dia ny maha endriny antsika fa tsy hitoetra amin’ny toerana izay natao ho an’ny zava-maniry na ho an’ny biby na ho an’ny tany na vato… Mba miverena ary amin’ny toerana nametrahana antsika.
Ny Tompo Jesosy anie hampahery anao.
You are currently browsing the filazantsaramada blog archives for the day vendredi 31 mai 2013.